Markale Ayuu Taariiq Sameynaya,Cristiano Ronaldo oo Hantay Abaalmarinta Xidiga Ugu Fiican Sanadka Portugal - Bandhiga Media
Markale Ayuu Taariiq Sameynaya,Cristiano Ronaldo oo Hantay Abaalmarinta Xidiga Ugu Fiican Sanadka Portugal
Hussein Banjaani September 3, 2019
Cristiano Ronaldo ayaa sii wada sameeynta taariikhaha uu ka sameynayo xulkiisa Portugal kadib markii uu ku guuleystay abaalmarintiisii 10aad ee ciyaaryahanka sannadka Portugal.
34-jirkan ayaa hantay abaalmarinta sannadlaha ah ee dalkiisa tan iyo 2007 wuxuuna qaatay abaalmarinta ugu sareysa sanad walba tan iyo markaas, marka laga reebo 2010 iyo 2014 oo ay kala hanteyn Simao iyo Pepe.
Ronaldo oo dhawaan ku biiray Juventus una qaaday horyaalkoodii sideedaad oo xiriir ah Serie A xilli ciyaareedkii hore, ayaa tartanka kaga adkaaday xiddigga Atletico Madrid Joao Felix, kan Manchester City Bernardo Silva, qadka dhexe ee kooxda Sporting Lisbon Bruno Fernandes iyo Wolves xidigoda ‘Ruben Neves.
Xaflad cajiib aheyd ayaa fiidnimadii xalay ka dhacday dhismaha Carlos Lopes Pavilion ee magaalada Lisbon halkaas oo Ronaldo uu kaga hadlay waxyaabo badan isago ku faaney maalmihiisii hore Sporting Lisbon hadal jeedintiisii.
“Adduunku waa dhaqso badan yahay, warbaahinta bulshada, saxaafadda, waa duurjoog,” ayuu yiri Ronaldo.
Waxay aheyd sanad aad u dhib badan heer shaqsiyeed, cidna ha u oggolaan in uu hoos kuu tuuro’’.
‘’Ma caawin karo laakiin waxaan xusaa in Sporting ay u qalman abaalmarin yar, Marka xiga’’.
Benfica ayaa aheyd guuleystayaashi ugu weyna ee xaflada ka aruurssada abaalmarinnada kooxda sanadka raga iyo haweenka.
Bruno Lage, maamulaha Benfica, waxaa loo aqoonsaday abaalmarinta macalinka sanadka ee Manager of the Year award.
Ronaldo, ayaa seegay abaalmarinta ciyaaryahanka sannadka ee Uefa iyadoo uu hantay daafaca Liverpool Virgil van Dijk, waxaana uu u sharaxan yahay abaalmarinta FIFA The Best ka dib markii loo magacaabay sedexda ugu danbeeysa.
Ninka reer Portugal ayaa markale u tartami doona abaalmarinta ugu weyn ee shaqsiyeed ee kubada cagta isago wajahi doona Van Dijk iyo xiddiga Barcelona Lionel Messi.
Ku guuleystaha waxaa lagu dhawaaqi doonaa 23ka bisha Sebtember xaflad ka dhaceysa magaalada Milano.
Dowladda Koofur Africa oo ka hadashay Rabshado lagu beegsaday dadka ajaanibta ah